Fifandonan-Kevitry ny Hetsika #RespectMyVote (Hajao Ny Safidiko) Sy Ny ‘Bangkok Shutdown’ (Fanakatonana an’i Bangkok) Ao Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2014 17:05 GMT
Izany no hafatra avy amin'ny vondrona sivika sy olon-tsotra izay nanao hetsika fandrehetana labozia izay any avaratr'i Thailand ny ankamaroany ho fanoherana ny hetsika fanentanana ‘Bangkok Shutdown’ [fanakatonana an'i Bangkok]. Mampiasa ny diezy Twitter #RespectMyVote ry zareo.
Ny kendren'ny mpanao fihetsiketsehana voalohany ao Bangkok dia ny hanongana ny Praiminisitra Yingluck Shinawatra izay ampangaina ho saribakolin'ny zokilahiny, ny praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra. Tafala tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana 2006 moa i Thaksin saingy mbola nandresy ihany ny antokony tamin'ny fifidianana. Lasa sesintany izy rehefa nomelohan'ny fitsarana ao an-toerana ho nanodikodim-bola.
Tonga amin'ny andro fahadimy amin'ny #BangkokShutdown isika izao, na dia lasa tahaka ny Fibodoana ny kihon-dalana 7 ao #Bangkok sy ireo lalana sasantsasany ho an'ny mpandeha an-tongotra
Izaho sy ny vadiko ao anatin'ny fandrehetan-dabozia ho amin'ny fandriampahalemana ao benjasiri #respectmyvote #nofacism
Lavitry ny #BkkShutDown sy ny fifantohan'ny fampitam-baovao, fihaonan'ny mpanohana ny fifidianana #RespectMyVote any Kalasin (Isan)
Amin'ny sary ianareo mahita olona mankany amin'ny #BKKShutdown. Saingy misy olona maro manohitra azy! #RespectMyVote #PheuThai
Nisy mpanakorontana iray aza nahavita nandefa mivantana ny hafatra #RespectMyVote tany amin'ny praiminisitra teo aloha sady mpitarika ny mpanohitra Abhisit Vejjajiva.
Mandritra izany fotoana izany i Fuadi Pitsuwan miampanga ny ‘didiko fe-lehiben'ny fanehoan-kevitra manerantany’ ary miaro ny fihetsiketseham-panoheran'ny ‘Fanakatonana an'i Bangkok’:
Nandritra ny tafatafa nalefa mivantana nandritra ny fotoana no nanazavan'ny mpitarika ny fihetsiketsehana ny Dr Seriny antony tsy hanohanany ny fifidianana ho avy:
Saingy mieritreritra i Ryan Zander fa hiteraka olana bebe kokoa ho an'ny mpanohitra io Vaomieram-Bahoaka natsangana io: